XOG-Xubno katirsan Alshabaab oo isku sharaxan barlamaanka Somalia & Alshabab oo u yeertay Isimada iyo ergooyinka beelaha.
Xildhibaan Idiris Cabdi Dhaqtar oo ka tirsan baarlamanka Soomaaliya ayaa ka hadlay ololaha soo xulitaanka barlamaanka Soomaaliya iyo loolanka ay Alshabaab ugu jiraan sidii ay kuraasta labad aqal xubno ugu yeelan lahaayeen.
Xildhibaanka ayaa sheegay in dhammaan ergooyinkii soo doortay xildihaabada baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya ee hadda shaqeynaya iyo Ugaasyadooda loo yeeray ayna Alshabaab kala hadleen soo saarista xubno ay wadato kooxda Alshabaab.
Waxa uu sheegay in doorashadii 2016 kadib, ay Alshabaab laayeen ergooyin badan si ay ugu tusaale qaataan kuwa 2020, taasina ay sababi karto in barlamaanka soo socda 80% ay noqdaan xubno gacan saar laleh ururka Alshabaab.
‘Anaga markaan doorashadii hore soo galnay ee 51-ka aheyd ergooyinkeenii kuli waxaa u yeertay Al-Shabaab, macalin Ugaasyadii ayaa loo yeeray macalin sama-doonadii ayaa loo yeeray waa lasoo tashkiiliyey (Tashkiil waxaa la dhahaa waxaa waaye waa la soo borogaraamiyey) hadda waxaa laga yaabaa xildhibaanadaan imaanaayo inay 80% noqdaan Shabaab,” ayuu yiri Xildhibaan Idiris Dhaqtar oo ka tirsan golaha shacabka.
Xildhibaan Idiris Cabdi Dhaqtar ayaa sheegay in dadka hadda iska sharaxaya baraha bulshada qaybo kamid ah ay wadato kooxda Alshabaab, isagoona xusay in arrintaani ay ka hortag u baahan tahay.
“Waxaa isa soo sharraxay oo hadda aan dareemi karno ee isa soo dhigay Facebook-yada musharraxan ahay meelahay sal ku leeyihiin waan ognahay waxay sal ku leeyihiin Al-Shabaabaa soo wadata lacag ayey xittaa ka bixineysaa saas ayaan aaminsanahay, sababtaasna waxa keenay waxa waaye doorashadan dadban,” ayuu markale yiri Dhatar.